Mitovy loatra ve ireo smartphone vaovao? | Androidsis
Mitovy loatra ve ireo smartphone vaovao?
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Finday, About us
Hitanay izany isaky ny famoahana vaovao, smartphone dia mitombo hatrany tsirairay avy. Na inona na inona marika, na inona na inona vidiny, dia mitovy amin'ny olona rehetra izy rehetra. Ara-dalàna ve izany? Nisy ve izany taloha? Normal tsy fantatsika raha hisy izany, fa ny fantatsika dia izany tsy nisy izany teo aloha, na farafaharatsiny mba tsy niseho tamim-pahanginana. Ny notch ve no omena tsiny?
Tsy taona maro lasa izay, sonia tsirairay anisan'ny tsena izany nanana farafaharatsiny teboka mampiavaka miaraka amin'ny ambiny. Azontsika atao ny mieritreritra ohatra mazava toa ny keyboard blackberry blackberry, zavatra iray na dia nilaozany aza ny hanakaiky ny fifaninanana dia miverina amin'ny laoniny amin'ny maodely farany izy.
1 Smartphone miaraka amina fakan-tsary sy fakan-tsary roa ... mety ho iza izany
2 Kivy kely sy originality kokoa
Smartphone miaraka amina fakan-tsary sy fakan-tsary roa ... mety ho iza izany
Mazava fa mivoatra ny marika sy ny maodeliny. Ary ataon'izy ireo amin'ny lalana notondroin'ny tsena izany. Tsy afaka mitaraina isika tato ho ato momba ny fivoaran'ny sehatra. Na aleo fanatsarana. Nohatsarain'izy ireo ny fakantsary, batterie, processeur ary koa ny efijery.
Tonga eo amin'ny tsena mihitsaka ity toerana ity. Ary na dia tsy i Apple aza no orinasa mpisava lalana dia tokony hekentsika fa taorian'ny nanombohan'ny iPhone X ny laharam-pahamehana nanafika ara-bakiteny ny tsena. Miaraka amin'ny faningana kely dia kely, ny orinasa rehetra dia manana eo anelanelan'ny laharany misy fitaovana manana ilay "volomaso" malaza.
Toy izany koa, misy fakan-tsary roa eto. Ary tena tsy fahita firy ny mahita finday finday vaovao izay tsy miloka amin'ny fakantsary roa misy fakan-tsary. Apetraka mitsangana na mitsivalana eo izy ireo, amin'ny ankamaroan'ny finday vaovao an'ny orinasa tsirairay.
Kivy kely sy originality kokoa
Ara-dalàna amin'ny orinasa rehetra ny misoratra anarana amin'ny vaovao ao amin'ity sehatra ity. Mbola bebe kokoa aza raha toa ka manatsara be ireo zava-baovao ireo. Nefa lizy evolisiona manoloana ny fanavaozana ny tsena dia toa mitovy hatrany hatrany. Misy fantsona vitsivitsy izay raha tsy hitantsika ny sary famantarana ny orinasa dia mety hifangaro amin'ny hafa.
Tianay ny zava-baovao, ary mazava ho azy fa rehefa mividy finday avo lenta isika dia maniry ny hanana ny farany rehetra. Notch, fakan-tsary roa, ny bateria tsara indrindra, ny processeur matanjaka indrindra. Fa ara-batana dia misy zavatra tsy maintsy miova. Izahay dia maniry telefaona tena izy. Ilaina ny mety hampidi-doza ny orinasa sasany. Raha tsy izany dia ho mankaleo hatrany ny katalaogin'ny smartphone. Ho hitantsika ve ny orinasa matanjaka be herim-po izay mety hitera-doza?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Mitovy loatra ve ireo smartphone vaovao?
Fangaro amalona iray amin'ny cookies no miandry anao ao amin'ny Cookie Wars hiatrika mpilalao hafa
Android Pie beta miorina amin'ny EMUI 9 dia tonga any Huawei sy Honor